အရည်အတွက်ပြ နာမဝိသေသန များ (Quantitative Adjective) - Myanmar Network
အရည်အတွက်ပြ နာမဝိသေသန များ (Quantitative Adjective)
Posted by AungKoU (UMK) on November 13, 2013 at 6:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတိုင်း No – Little/ A little – Few/ A few – Some/ Any – Much/ Many – A lot of ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီး မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်သုံးတဲ့အခါ ရောထွေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Quantitative Adjective တွေ အကြောင်းကို ရေးသား လိုက်ပါတယ်။
No - သည် လုံးဝမရှိသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ ရေတွက်ရနာမ် (Countable Noun) နှင့် ရေတွက်မရနာမ် (Uncountable Noun) နှစ်မျိုးလုံးအတွက် သုံးနိုင်သည်။
ဥပမာ - I have no book. (ကျွန်တော့်မှာစာအုပ် မရှိပါ။)
I have no money. (ကျွန်တော့်မှာပိုက်ဆံမရှိပါ။)
Little - သည် အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်ပြီး ရေတွက်မရနာမ် (Uncountable Noun) သာသုံးရပါသည်။ မရှိသလောက်ပဲဟု အဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုခု ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပင် မလုံလောက်သည့် ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - Little sugar is not enough to makeacup of tea.
Few - သည် Little နှင့် ပမာဏအတူတူပင် ဖြစ်ကာအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်လည်းတူညီပါသည်။ သို့ရာတွင် သတိထားမှတ်သားရမည်မှာ Few ကို ရေတွက်ရနာမ် (Countable Noun) အတွက်သာ အသုံးပြု ရပါသည်။
ဥပမာ - Few people likes the mosquitos. (ခြင်ကို ကြိုက်တဲ့ လူရယ်လို့ မရှိသလောက်ပဲ။)
A little - သည် Little ထက် အနည်းငယ်ပိုကာ အများကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ သုံးလို့ရနိုင်သော ပမာဏကို ညွှန်းပါသည်။ Little ကဲ့သို့ ပင် A little ကို ရေတွက်မရနာမ် (Uncountable Noun) အတွက် အသုံးပြုရပါသည်။
ဥပမာ - Please give mealittle sugar. I want to makeacup of tea. (ကျေးဇူးပြုပြီး သကြား နည်းနည်းလောက်ပေးပါ၊ လက်ဘက်ရည် တစ်ခွက်လောက် ဖျော်ချင်လို့ပါ။)
A Few - သည် Few ထက် အနည်းငယ်ပိုသော ပမာဏကို ညွှန်းဆိုကာ A little နှင့် ပမာဏတူညီပါသည်။ သတိပြုမှတ်သားရန်မှာ A Few သည်လည်း ရေတွက်ရနာမ် (Countable Noun) အတွက်သာ အသုံးပြုရပါသည်။
ဥပမာ - There areafew students in the classroom. (အတန်းထဲမှာ ကျောင်းသား နည်းနည်းပဲ ရှိတယ်။)
[မှတ်ချက်။ ။ No, Lillte, A little, Few, A few တို့ကို အဟုတ်ဝါကျ (Affirmative Sentence) အတွက်သာ အသုံးပြုရပါသည်။ ]
Some/ Any - သည် Little/ A little/ Few/ A few တို့ထက် များသော ပမာဏ ဖြစ်ပြီး အသုံးအနှုန်းကို အဓိက သတိထားရပါမည်။ Some ကို အဟုတ်ဝါကျ Affirmative တွင် အသုံးပြုပြီး အငြင်းဝါကျ (Negative Sentence) နှင့် မေးခွန်းဝါကျ (Question Sectence) များအတွက် Any ကို အသုံးပြုရပါသည်။
ဥပမာ - I have some money. (ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံ အချို့ရှိတယ်။)
I have some friends. (ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်း အချို့ ရှိတယ်။)
I haven’t any money. (ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှ မရှိဘူး)
I haven’t any friends. (ကျွန်တော့မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး)
Is there any water in the pot? (အိုးထဲမှာ ရေရှိလား?)
Is there any students in the classroom. (အတန်းထဲမှာ ကျောင်းသားတွေ ရှိလား?)
Much - သည် Some ထက်များသော ပမာဏကို ဖော်ပြပြီး ရေတွက်မရနာမ် (Uncountable Noun) အတွက် အသုံးပြုရပါသည်။
ဥပမာ - I have much money. (ကျွန်တော်မှာ ပိုက်ဆံတွေ တော်တော်များများ ရှိတယ်။)
Many - သည် Much နှင့် ပမာဏအတူတူပင် ဖြစ်ကာ ရေတွက်ရနာမ် (Countable Noun) အတွက်သာ အသုံးပြုရပါသည်။
ဥပမာ - I have many friends. (ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်း များများရှိတယ်။)
A lot of - ကို ရေတွက်မရနာမ် (Uncountable Noun) နှင့် ရေတွက်ရနာမ် (Countable Noun) ၂-မျိုးလုံး အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အများဆုံးသော ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - I havealot of money. (ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှိတယ်။)
I havealot of friends. (ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်။)
(Quantitative Adjective များကို ဖော်ပြထားသော ဇယားဖြင့် တွဲကာ လေ့လာပါ။)
၎င်းတို့အနက်မှ အနည်းငယ် အသုံးအနှုန်း ရှုပ်ထွေးတတ်သည့် Little အကြောင်းကို အနည်းငယ် ဆက်လက် ပြောပါမည်။
Little သည် Degree 1 ဖြစ်ပြီ Degree2ပြောင်းလျှင် Less ဖြစ်ကာ Degree3သည် Least ဖြစ်သည်။
ဥပမာ - I have little money. It is not enough to buy evenabook.
(ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံ နည်းနည်းပဲရှိတယ်၊ အဲဒါက စာအုပ်တစ်အုပ် ဝယ်ဖို့တောင် မလောက်ဘူး)
Mummy gives me pocket money less than I except.
(အမေပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးက ကျွန်တော်မှန်းထားတာထက် နည်းတယ်။)
This coat will coast at least 15000 kyats.
(ဒီကုတ်အင်္ကျီက အနည်းဆုံး ၁၅၀၀၀ လောက် ကျလိမ့်မယ်။)
Little ကို သေးငယ်သော ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖြင့် သုံးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်စနိုးဖြင့် သုံးသော အခါလည်း Little ကို သုံးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- There are three hands inaclock. The little hand is second hand. (နာရီတစ်ခုမှာ လက်တံ ၃-ခုပါတယ်၊ လက်တံသေးသေးလေးက စက္ကန့်လက်တံပါ။)
Her little face is so cute. (သူမျက်နှာလေးက ချစ်စရာလေး) မျက်နှာသေးသည်ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ ချစ်စနိုးဖြင့် ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မကြိုက်နှစ်သက်အခါ Little ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်အဖြစ် Big ကို သုံးလေ့ရှိပါသည်။ဥပမာ- I don’t like her big face. (အဲဒီ မျက်နှာကြီးကို ငါမကြိုက်တာ)
I like this little house. (ဒီအိမ်လေးကို ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်။) အိမ်က အရွယ်အစား အားဖြင့် ငယ်ချင်မှ ငယ်မည် ဖြစ်သော်လည်း ချစ်စနိုးဖြင့် ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။
My little sister is so smart. (ကျွန်တော့်ညီမလေးက အရမ်း တော်တာ) ညီမအရင်း ဖြစ်ကောင်းလည်း ဖြစ်မည်။ ညီမအရင်း မဟုတ်သော သက်ဆိုင်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာတွင်လည်း မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါ “ဒါ ငါ့ညီမလေးလေ၊ ဒါ့ ငါ့ ကိုကြီးပေါ့” စသည်ဖြင့် အသုံးပြုသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါသည်။)
Little ကို အရေးမကြီးသော၊ မပြောပလောက်သော အဓိပ္ပာယ် ဖြင့်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - I hadalittle problem with my car, but it’s been fixed now.
(ကျွန်တော့်ကားမှာ မဆိုစလောက်လေး ပြဿနာ ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ပြင်ပြီးသွားပါပြီ။)
· ယခု ဝါကျတွင်aသည် article အဖြစ်သုံးထားခြင်းဖြစ်ပြီး little ကို မဆိုစလောက်ဖြစ်သော/ မပြောပ လောက်သော ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် Adj အဖြစ်သုံးထားခြင်းဖြစ်ကာ နောက်က problem (noun) ကို အထူးပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Don’t hurt yourself about this little problem.
(ဒီ မပြောပလောက်တဲ့ ပြဿနာလေးနဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မထိခိုက်ပါစေနဲ့)
Little ကို Adv အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်၊ နည်းနည်း/ အနည်းငယ်/ အနည်းအကျဉ်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။
ဥပမာ - He is little know as an actor.
(သူက နည်းနည်းပဲ ထင်ရှားတဲ့ မင်းသား တစ်ယောက်ပါ/ သူက သိပ်ပြီး မထင်ရှားတဲ့ မင်းသား တစ်ယောက်ပါ။)
(ကျွန်တော် ညက တကယ့် နည်းနည်းလေးပဲ အိပ်ရတယ်။)
She eats very little at dinner.
သူ(မ)က ညနေစာ တကယ့် နည်းနည်းလေးပဲ စားတယ်။
Little သည် ယခုရေးသားထားသော အသုံးအနှုန်း အပြင် နောက်ထပ် အသုံးအနှုန်းပုံစံများလည်း ရှိပါသေးသည်။ သို့ရာတွင် စာအရမ်းရှည် သွားလျှင် ဖတ်ရာတွင် လေးသွားမည် စိုးသည့်အတွက် အသုံးများသော/ အသုံးဝင်သော အသုံးများကို ဦးစားပေးရေးသား လိုက်ပါသည်။
“အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတိုင်း အရည်အသွေး တိုးတက်ကြပါစေ ……… ”
Permalink Reply by thwe thwe phyo on November 15, 2013 at 11:08